विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? |विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? – हिपमत
विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ?
काठमाडौं ,२९ पौष :केही समयपछि म विवाह गर्ने योजनामा छु। पहिलो यौन सम्पर्कलाई लिएर के–के कुरामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ? के विवाह पहिलेको यौन सम्पर्क थाहा हुन्छ ? – आर, चितवन
डा. सुमनराज ताम्राकार, स्त्री तथा प्रसूति विशेषज्ञका अनुसार
मंगलबार, पौष २९, २०७६मा प्रकाशित गरिएको